भोलि इटाली, स्पेनको जस्तो ला’स उठाउनु भन्दा आज लठ्ठी उठाउनु नै ठीक : मेयर फागो – Khabarhouse
भोलि इटाली, स्पेनको जस्तो ला’स उठाउनु भन्दा आज लठ्ठी उठाउनु नै ठीक : मेयर फागो
Khabar house | १३ चैत्र २०७६, बिहीबार १२:०१ | Comments
काठमाडौं, १३ चैत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । आज लक डाउनको तेस्रो दिन । लकडाउन गरेकाे पहिलाे दिन मंगलबार र दोस्रो दिन बुधबार भन्दा आज थप सुनसान बनेको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई अवज्ञा गर्दै सडकमा निस्किने वि’रुद्ध प्रहरी कडाइका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
देशका विभिन्न भागमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रहरीको टोली खटिरहेको छ । केही स्थानमा प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी पनि परिचालित भइ रहेको छ । लकडाउनकाे अवज्ञ गर्दै सवारी साधन चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा गर्दै आएकाे छ । कतिपय ठाउँमा भने लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई प्रहरीले लठ्ठी हानेको, उठबस गराएको, मुर्गा बनाएको भिडियाेहरू सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छन् ।
आज लकडाउनको तेस्रो सामाजिक सञ्जालमा अर्काे भिडियाे भा’इरल बनेकाे छ । भिडियाे हाे, उर्लाबारी नगरपालिकाकाे । याे भन्दा अगाडी पनि सुनसरीको इटहरी उपमहानर गपालिका एउटा भिडियाे भाइरल बनेकाे थियाे। उक्त भिडियाेमा एक साइकल यात्रुलाई प्रहरीले लठ्ठी हानेको थियो । दाेस्राे भाइरल भिडियाेमा सडकको बीचमा केही सवारी साधानहरु रोकिराखेको देखिन्छ ।
त्यहाँ केही सुरक्षाकर्मी र गार्ड जस्ता देखिने मानिस लौरौ नै लिएर उभिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी बाहेक मुखमा मास्क, क्याप र जिन्सको पाइन्ट लगाएर एक पुरुष पनि छन्। उनले हात तेर्साउँदै भन्छन्- ‘ए त्यो डण्ठा ले ले, छिटो ले ।’ लोरौ हात पर्ने साथ बाइ कमा भएकाहरुलाई खेदाउन थाल्छन् । सडकमा निस्कनेहरुलाई ‘घर जानु घर’, ‘हिड्नु हुँदैन भन्ने थाहा छैना ?’ भन्दै उनी हातमा ल’ठ्ठी लिएर डुलिरहेका छन् ।
त्यसरी लठ्ठीले हिर्काउँदै हिँड्ने व्यक्ति हुन्- मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर फागो । सरकारले गरेको लकडाउनको अवज्ञ गरेपछि मेयर आफै सडमा उत्रिएका हुन् । जनताले सुरक्षकर्मीलाई नटेरेपछि आफू सडकमा उत्रिनु परेको मेयर फागोले बताए । न्यूज २४ नेपालसँग कुराकानिमा उनले भनेका छन्- ‘सुरक्षकर्मीहरुलाई टेर्ने अवस्था भइदिन, त्यहि भएर लठ्ठी उठाउनु पर्याे ।’
अहिले चाहिँ पूर्ण रुपमा लक डाउनको पालाना भएको पनि उनले बताए । ‘मेयरले नै लठ्ठी हान्नु पर्ने अवस्था थियाे र ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने,’ ल’ठ्ठी हा’नुपर्ने अवस्था नै आयो, अहिले मेयरले कु’ट्नु नुहने भनेर प्रश्न आउछ, मेरो पनि बालबच्चा, छोरा छोरी छन्, मलाई पनि त घरभित्रै बस्न मन छ । तर एकजनाले गर्दा एक/दुई जनाले गर्दा भोलि समाजलाई नै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएन ।’
मेरय पनि देशकाे एउटा नागरिक भएकाे भन्दै उनले भने, ‘मेयर भनेको चाहिँ को हो ? देशको एउटा नागरिक न हो । मेयर भनेको खुट्टा हाल्लाउँदै कुर्चिमा बस्ने। पेट ठूलो पार्नका लागि मिठो-मिठाे खाँदै बस्ने हाेइन ।’ एक/दुई जनाले गर्दा भोलि इटाली, स्पेन मा जस्ताे अवस्था नआउला भन्न नसकिने उनले बताए । ‘इटाली, स्पेनमा पनि वेवास्ता गर्नाले अहिले त्यस्तो हालत भएको हाे । दिनहुँ ७ सय/८ सय म’रि’रहेका छन् , अहिले गाड्ने ठाउँ पनि छैनन् ।
हामीले पनि वेवस्ता गर्यौ भने त्यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । उनले सुरुमा सम्झाएको तर नमानेको उनले बताए । हामीले सोधेका छौँ, खाद्यान्यको लागि हो ? बिरामी हुनुहुन्छ ? अति आवश्यक काम छ ? भनेर तर हाेइन भन्दै सडकमा निस्कन्छन्, उनले भने, ‘ भोलिको दिनमा इटाली, स्पेनमा जस्तो ला’स उठाउनु भन्दा हुनुभन्दा ड’ण्ठा हा’न्दा नै वेस हुन्छ,’ उनले भने । न्यूज २४ नेपालवाट साभार